လူပုလေးဆိုပေမဲ့ စေသနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ငလျင်ဒဏ်သင့်ပြည်သူတွေကို ကိုယ်တိုင်ကယ်ဆယ်ပေးခဲ့တဲ့အမျိုးသား (ရုပ်သံ) - Mckzone Daily
လူပုလေးဆိုပေမဲ့ စေသနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ငလျင်ဒဏ်သင့်ပြည်သူတွေကို ကိုယ်တိုင်ကယ်ဆယ်ပေးခဲ့တဲ့အမျိုးသား (ရုပ်သံ)
လူစဉ်မမီရောဂါ(dwarfism)ခံစားနေရတဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ် တူရကီနိုင်ငံကို ၆.၆အဆင့်ပြင်းအားရှိတဲ့မြေငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီးနောက် ကယ်ဆယ်ရေးစေသနာ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တာကြောင့် တူရကီနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းကြီးပိုင်းသတင်းမှာ ဖော်ပြခံခဲ့ရပါတယ်။အသက် ၂၉နှစ်အရွယ် Ridvan Celikအမည်ရှိအဆိုပါအမျိုးသားဟာ သူ့ရဲ့သေးငယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားကို အသုံးပြုပြီး အမှောင်ဘက်ငလျင်ဘေးဒဏ်သင့်သူတွေကို ကူညီကယ်ဆယ်ပေးခဲ့တာကြောင့် သူရဲကောင်းတစ်ဦးအဖြစ် လူသိများကျော်ကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ ၃ပေအမြင့်သာရှိတဲ့ Ridvanရဲ့အရပ်ဟာ သူ့အား ကျဉ်းမြောင်းတဲ့နေရာတွေထဲ ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးပြီး အပေါက်သေးသေးတွေထဲသို့ တွားသွားစေနိုင်ခဲ့တာကြောင့် တိုင်းပြည်ရဲ့ငလျင်ဒဏ်အဆိုးဆုံးခံရတဲ့ Izmirမြို့ရှိ အပျက်အစီးတွေကြားက လူတွေကို ကယ်တင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
IZMIR, TURKEY – OCTOBER 30: A view ofaquake damaged site afteramagnitude 6.6 quake shook Turkey’s Aegean Sea coast, in Izmir, Turkey on October 30, 2020. (Photo by Mehmet Emin Menguarslan/Anadolu Agency via Getty Images)
အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ Ridvanက”Istanbulမြို့ကနေ မြေငလျင်လှုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြားခဲ့ရတော့ ငါကိုယ်တိုင်ကားလက်မှတ်ဖြတ်ပြီး Izmirမြို့ကိုရောက်လာခဲ့တယ်၊ဒီမှာ အဖော်တွေအများကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့တယ် ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုမြင်တော့ ၁၉၉၉ခုနှစ်တုန်းက အပျက်အစီးတွေကြားက ကလေးငယ်လေးတွေနဲ့မိဘတွေကို ပြန်သတိရမိတယ် ငါချစ်တဲ့လူတွေလို့ခံယူပြီး ကယ်ဆယ်ပေးဖို့ အန္တရာယ်ထဲကို ခုန်ဝင်ခဲ့တယ် ငါ တွန့်ဆုတ်မနေခဲ့ဘူး”လို့ ဖြေကြားထားပါတယ်။
Ridvanဟာ တူရကီကိုသာမကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက အင်တာနက်သုံးစွဲသူတွေကို လှုံဆော်စေခဲ့တဲ့လူတစ်ဦးဖြစ်လာရတာလည်း ပြောနေစရာတောင်မလိုတော့ပါဘူး။အစီရင်ခံစာတွေအရ တူရကီရဲ့မြေငလျင်ဟာ လူဦးရေပေါင်း ၁၁၆ဦးသေဆုံးစေခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး များစွာတဲ့လူတွေ ပျောက်ဆုံးနေသေးတာကြောင့် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။သို့ပေမဲ့ အပူချိန်ကျဆင်းနေခြင်းကြောင့် စေသနာ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက် အခက်တွေ့စေကာ ပိုမိုစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်လာနေပါတယ်။ကိုယ်တတ်နိုင်စွမ်းသလောက် စေသနာထားပြီး ကြိုးစားကူညီပေးနေတဲ့ Ridvanကို အရမ်းဘဲလေးစားအားကျနေမိပါတယ်။
Ridvan Celik (29), who is 98 centimeters in length, was searching and rescuing people for4days without sleeping, after the 6.6 magnitude earthquake in Izmir. (Newsflash)
လူစဉျမမီရောဂါ(dwarfism)ခံစားနရေတဲ့ အမြိုးသားတဈဦးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့အပတျ တူရကီနိုငျငံကို ၆.၆အဆငျ့ပွငျးအားရှိတဲ့မွငေလငျြလှုပျခတျပွီးနောကျ ကယျဆယျရေးစသေနာ့ဝနျထမျးတဈဦးအဖွဈပါဝငျခဲ့တာကွောငျ့ တူရကီနိုငျငံရဲ့ခေါငျးကွီးပိုငျးသတငျးမှာ ဖျောပွခံခဲ့ရပါတယျ။အသကျ ၂၉နှဈအရှယျ Ridvan Celikအမညျရှိအဆိုပါအမြိုးသားဟာ သူ့ရဲ့သေးငယျတဲ့ခန်ဓာကိုယျအရှယျအစားကို အသုံးပွုပွီး အမှောငျဘကျငလငျြဘေးဒဏျသငျ့သူတှကေို ကူညီကယျဆယျပေးခဲ့တာကွောငျ့ သူရဲကောငျးတဈဦးအဖွဈ လူသိမြားကြျောကွားသှားခဲ့ပါတယျ။ကံကောငျးထောကျမစှာနဲ့ ၃ပအေမွငျ့သာရှိတဲ့ Ridvanရဲ့အရပျဟာ သူ့အား ကဉျြးမွောငျးတဲ့နရောတှထေဲ ဝငျရောကျခှငျ့ပေးပွီး အပေါကျသေးသေးတှထေဲသို့ တှားသှားစနေိုငျခဲ့တာကွောငျ့ တိုငျးပွညျရဲ့ငလငျြဒဏျအဆိုးဆုံးခံရတဲ့ Izmirမွို့ရှိ အပကျြအစီးတှကွေားက လူတှကေို ကယျတငျပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ။
Ridvan Celik (29), who is 98 centimeters in length, was searching and rescuing people for4days without sleeping, after the 6.6 magnitude earthquake in Izmir.
အငျတာဗြူးတဈခုမှာ Ridvanက”Istanbulမွို့ကနေ မွငေလငျြလှုပျတာနဲ့ပတျသကျပွီးကွားခဲ့ရတော့ ငါကိုယျတိုငျကားလကျမှတျဖွတျပွီး Izmirမွို့ကိုရောကျလာခဲ့တယျ၊ဒီမှာ အဖျောတှအေမြားကွီးနဲ့တှခေဲ့တယျ ဒီအဖွဈအပကျြကိုမွငျတော့ ၁၉၉၉ခုနှဈတုနျးက အပကျြအစီးတှကွေားက ကလေးငယျလေးတှနေဲ့မိဘတှကေို ပွနျသတိရမိတယျ ငါခဈြတဲ့လူတှလေို့ခံယူပွီး ကယျဆယျပေးဖို့ အန်တရာယျထဲကို ခုနျဝငျခဲ့တယျ ငါ တှနျ့ဆုတျမနခေဲ့ဘူး”လို့ ဖွကွေားထားပါတယျ။
Ridvanဟာ တူရကီကိုသာမကကမ်ဘာတဈဝှမျးက အငျတာနကျသုံးစှဲသူတှကေို လှုံဆျောစခေဲ့တဲ့လူတဈဦးဖွဈလာရတာလညျး ပွောနစေရာတောငျမလိုတော့ပါဘူး။အစီရငျခံစာတှအေရ တူရကီရဲ့မွငေလငျြဟာ လူဦးရပေေါငျး ၁၁၆ဦးသဆေုံးစခေဲ့ပွီဖွဈပွီး မြားစှာတဲ့လူတှေ ပြောကျဆုံးနသေေးတာကွောငျ့ ကယျဆယျရေးလုပျငနျးတှေ ဆကျလကျလုပျဆောငျနကွေပါတယျ။သို့ပမေဲ့ အပူခြိနျကဆြငျးနခွေငျးကွောငျ့ စသေနာ့ဝနျထမျးတှအေတှကျ အခကျတှစေ့ကော ပိုမိုစိနျချေါမှုတှဖွေဈလာနပေါတယျ။ကိုယျတတျနိုငျစှမျးသလောကျ စသေနာထားပွီး ကွိုးစားကူညီပေးနတေဲ့ Ridvanကို အရမျးဘဲလေးစားအားကနြမေိပါတယျ။
သေသူရဲ့ကိုယ်စား ကျန်ရစ်သူဆွေမျိုးတွေကို တစ်တစ်ခွခွ ဆဲပေးရုံနဲ့ ငွေဝင်ကြမ်းနေသူ
ဓာတ်ပုံထဲမှာလှဖို့သာအာရုံစိုက်နေပြီး Selfie သာရိုက်နေခဲ့လို့ အမြင့် 2,000m ရှိတဲ့တောင်ထိပ်ကနေပြုတ်ကျခဲ့အမျိုးသမီး